Mayelana nathi - Foshan Tongyida Ukuphakamisa Izinsiza kusebenza Co., Ltd
Foshan Tongyida Ukuphakamisa Izinsiza kusebenza Ukukhiqiza Co., Ltd ezikhethekile design, ukukhiqiza kanye nokuhlinzekwa ephakamisa futhi kokusiphakamisela imishini.
Ngemva cishe 5 kweminyaka yentuthuko, namuhla thina simunye izinkampani phambili emkhakheni wethu, sinalo izintonga 100 professional design ovuthiwe ithimba, izinga ukulawula ithimba, ukukhiqizwa ithimba kanye yokuthengisa service team.
Tongyida Ukuphakamisa Izinsiza kusebenza Iqembu anganikeza zonke ephakamisa imishini nokusingatha impahla izidingo zakho mathupha ngamanani kakhulu njengoba ukuncintisana. Nge International ISO Ukuvunyelwa izinhlelo zayo ikhwalithi CE, GS, TUV isitifiketi, iqembu lethu bayaziqhenya ukwamukela wena ukuvakashela factory sethu futhi babheke phambili ukuzwa kuwe.
Thina unamathele isimiso 'izinga lokuqala, inkonzo lokuqala, intuthuko eqhubekayo futhi emisha ukuhlangabezana amakhasimende "futhi" zero isici kulo, zero izikhalazo "njengoba inhloso izinga.